China Guy Strand Vise orinasa mpamokatra sy mpamokatra | Waxun
FITIAVANA TANANA OTOMATIKA
Strand Vise dia antsoina koa hoe deadend tariby mandeha ho azy, izy io dia kojakoja miendrika koneza izay matetika apetraka eo amin'ny farany ambanin'ny bao fandefasana. Eto dia mifandray amin'ny ambany tariby bandy. Strand vise koa dia ampiasaina amin'ny tsipika ambony izay ampifandraisina amin'ny rindranasa maty. Ny asany voalohany dia ny famaranana ny tariby bandy sy ny tariby overhead.
Vise strand dia natao hametahana amin'ny tariby amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fandrika rantsana. Eto, lohataona iray mametaka ny valanoranony amin'ny tariby ka mametraka ilay fitaovana. Navoaka ny valanoranony hisorohana ny fivezivezena mankany ambony.
Ny zavatra tsara momba ny vie strand dia tsy misy voanjo hampiasana tselatra amin'ny tariby. Midika izany fa tsy ilaina ny mametaka azy amin'ny tanany.
Ny fananganana mafy ny vie strand dia mahatonga azy io azo antoka amin'ny fampiharana marobe ary koa amin'ny tontolo samihafa. Izy io dia manasongadina vy vita amin'ny vy izay tsy vitan'ny hoe matanjaka fa voaaro amin'ny fanimbana simika.
Strand vise dia azo ampiasaina amin'ny kofehy isan-karazany, anisan'izany ny las las, galvanis, aluminized, ary EHS, strand vy.
Ny famolavolana kofehy dia mahatonga azy hifanaraka amin'ny kofehin'ny indostrialy. Izy io dia afaka manohana tariby isan-karazany noho ny volavola bale manerantany.
Ny deadend strand mandeha ho azy & Splice dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny telefaona telefaona sy herinaratra elektrika hamarana ny tadiny na tehina eo an-tampon'ny andry sy eo amin'ny mason'ny vatofantsika. Ho an'ny Strand fampiatoana, Guy Strand ary Wire static. Nampiasaina hamaranana ny iraky ny helodrano mpanelanelana an'habakabaka, ary amin'ny tendrony ambony sy farany ambany ry zalahy ambany. Ny fetra farany vita amin'ny kodiarana mandeha ho azy dia natao ho an'ireo kofehin-tariby 7 tariby sy tariby matevina fantatra amin'ny marika marika, fonosana, karazana vy ary ao anatin'ny elanelam-potoana voatanisa, fa tsy kofehin'ny tariby 3 fa tsy Alumnoweld. Ampiasaina ampiasaina amin'ny zinc vita amin'ny zinc, Aluminized, ary Betalume.
Fampiharana: • Ho an'ny fampiharana amin'ny faran'ny daty misy tariby bandy ambony na midina • Ny «Iraisam-pirenena» dia atolotra hampiasaina miaraka amin'ny Alumoweld, Aluminized, EHS ary Steel Galvanized Tady vy nandrisika sy vita Aluminized
Miorina amin'ny faritry ny tariby malalaka
Afaka mitazona farafahakeliny RBM 90%
Azo ampiasaina amin'ny kofehy vy isan-karazany
Volavola tsotra ho an'ny fametrahana mora sy haingana
Mety ho an'ny tariby bandy ambony sy ambany
Ny famolavolana endrika cone dia manome antoka fa voafatotra mafy amin'ny kofehy izy ireo
1.Ataovy manodidina ny maso vatofantsika ny vatam-patotra ary apetaho miaraka aminy ireo tongotra roa, mba hikorisa
mifarana ny zioga eo ambonin'ilay voaloa. Jereo ny sary 1
2. Ampidiro ao amin'ny sofina ivelany amin'ny zioga ny famandrihana lava, ary ampifandraiso ilay rojo
farango. Jereo ny sary 2
3. Apetaho eo amin'ilay tariby bandy ilay rojo vy ary asio fihenjanana mba hanesorana ny malaina amin'ny tariby bandy.
4. Apetraho ny singa mitana amin'ny alalàn'ny zioga. ** Aza esorina ny plug misy loko ** Jereo FIG 3
5.Aorian'ny fampidirana ny singa mitana amin'ny zioga, ahodino ny singa fitehirizana, mandra-pahatongan'ny singa mitazona
Ny "bubble" dia miatrika ivelany, hihidy amin'ny zioga. Jereo ny sary 3b
6.Mba hiantohana ny fametrahana tsara sy ny fahombiazana maharitra dia azo antoka fa voadio madio ny faran'ny, tsy misy
burrs, nefa tsy mivadi-po; tariby dia tokony ho mahitsy sy mihiditra (tsy miondrika, kinks na miolakolaka)
7. ampidiro tariby bandy manome antoka ny kofehin-tsofina rehetra hiditra ao anaty kaopin'ny mpanamory, avy eo atosiho amin'ny tariby ilay tariby
singa mandra-pivoakany ny plugand miloko mivoaka ny singa mitazona. Jereo ny sary 4
8. Tariho ny tariby hamafana ny mason'ny vatofantsika. Jereo ny sary 4b
9.Famarana ny fametrahana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tariby bandy amin'ny fihenjanana tadiavina.
10. Topazo maso ny fametrahana ary esory ny fiakarana. Jereo ny sary 5
• Ny faran'ny seranana GDE dia nomena isa 90% RBS MAX
• Ireo torolàlana momba ny fametrahana ireo dia ho an'ny referansa ihany. Tokony harahina ny torolàlana momba ny fiarovana rehetra. Ireto torolalana ireto
aza manolo ireo protokol ilaina.
Teo aloha: YH Composite mifono zinc oxide arrester
Manaraka: Wire vy mandeha ho azy
fe-potoana tariby mandeha ho azy bandy mandeha ho azy
STEEL GUY WIRE STRANDVISE
Visy bandy mitafy volo